Madaxweynaha Puntland oo xilkii ka cayrshay guddoomiye ku xigeenkii gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo xilkii ka cayrshay guddoomiye ku xigeenkii gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi
March 4, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Qaasim Maxamed Cabdi, guddoomiye ku xigeenkii gobolka Nugaal. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xilkii ka qaaday guddoomiye ku xigeenkii gobolka Nugaal, Qaasim Maxamed Cabdi, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyada oo uu arkay warsidaha Puntland Mirror.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa Cali Salaad diiriye u magacaabay guddoomiye ku xigeenkii gobolka Nugaal, sida lagu xusay digreetada.
Dabayaaqadii sanadkii 2015-kii ayaa Madaxweynuhu Qaasim u magacaabay guddoomiye ku xigeenka gobolka Nugaal kadib markii uu ka qaaday xoghayaha dowladda hoose ee Garoowe oo uu ahaan jiray.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo loo dhaarshay xubinimada baarlamaanka
Mogadishu-(Puntland Mirror) Two Al-Shabab fighters were killed in U.S. airstrike in Somalia, the U.S. Africa command said in a statement on Thursday. The strike occurred in the village of Mubaraak, approximately 37 miles west of [...]